Abanempilo, isikhumba uzilungise, khulula induna kanye nezibazi, amaphupho kokuba wonke umuntu kungakhathaliseki ubulili nobudala. Intsha, abafana namantombazane, abesifazane futhi amadoda azethembe kakhulu uma ngayinye kubo ebusweni nomzimba azikho nemibi yobuhle. Kodwa njengoba sazi, mayelana 80% abantu abasha abaneminyaka engaphansi kwengu-20 kwelinye izwe, futhi cishe ingxenye leminyaka engaphezu kuka-20 ubudala esekhala nesenzakalo njalo noma ngezikhathi ezithile induna. Ngokungafani izidakamizwa "Kvotlan" ukuthi Izibuyekezo sikhunjuzwa ukuthi kuyasiza ukuqeda ukuvuvukala nesimungumungwane esikhumbeni, iningi izimonyo musa ukuxazulula inkinga eyinhloko ukususa induna, kodwa imaski nezinduna kuphela. Sisebenza kahle kangakanani ukhilimu ethandwa kangaka namuhla? Ingabe kuyasiza ngempela ukuhlanza isikhumba ezindaweni inkinga?
Imithi Innovative ukuthuthukiswa kazwelonke
umkhiqizo ukugcoba Kvotlan "umkhiqizo ngezinhloso zokwelapha 'wethulwa emuthini emakethe Russian muva futhi iphathwe izakhe njengenhlangano ngempumelelo ikhambi induna, ukuvuvukala, induna, ukulunywa yizinambuzane, ukusha kanye nezinye ukulimala esikhunjeni. Lokhu ijeli, kanye neminye imikhiqizo zokwelapha zalesi brand ( "EMANSI", JSC "Kvotlan"), iphephile, cishe akukho imiphumela emibi. He is ziphoqa hhayi kuphela ezweni lethu kodwa futhi phesheya.
Izinzuzo ukhilimu "Kvotlan" abathengi abaningi banomuzwa ukungabi ukubunjwa yayo hormone nemithi elwa namagciwane okufakwa, utshwala nomzimba. Kubantu ebucayi abangathandi engabacasuli chemical ngamakha, izindaba ezinhle kwakuwukuba khona e ekwakhiweni ayinaphunga amakha ukunambitheka. Yini enye bathandile abathengi ukhilimu "Kvotlan"? Izibuyekezo ukudumisa iphakethe lula: lingaqedwa wafaka esikhwameni, futhi zosizo umshayeli kuqala. Tube ne 20 ml izidakamizwa kungathatha nobunjalo noma uhambo.
Ukwakheka kanye izakhiwo yezingxenye
Isakhiwo "Kvotlan" ukhilimu iqukethe 8 izingxenye. The main izinto asebenzayo yilezi: glikolan, triethylene glycol, ETHYL carbitol, cetylpyridinium chloride monohydrate. Labo abasele abanga-4 izingxenye asizayo ukunikeza Ukungena ejenti zokwelapha ku dermis nethonya lazo: glycerin, polyethylene oxide, amanzi deionized futhi zokuyithena amaphunga isithokela.
Le into amagciwane, okuyinto has nethonya elilimaza ngokumelene amagciwane namanye amagciwane. Ukumboza amanxeba kanye induna ifilimu elincanyana, le ngxenye ine umphumela anti-inflammatory esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, kukhuthaza inqubo isikhumba ukuvuselelwa.
Le into viscous nge izakhiwo magciwane. It kuvimbela okusheshayo omiswe okhilimu kanye adhesion kwamanzi iphathwa kwesikhumba. Le ngxenye isetshenziswa ngemithamo emincane emsebenzini wokukhiqiza imithi kanye izimonyo.
Kuyinto ingxenye elwa namagciwane lisetshenziswe ukukhiqizwa amakha izimonyo njengoba germicide kanye amafutha abalulekile isici-Ukuqedwa.
Kuhloswe kuphela ukusetshenziswa ongaphandle. It kuvimbela ukubonakala comedones (namaqhubu) kanye induna Ukuphinda.
Lokhu emollient kungaba ngcono izinqubo umzimba e ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu ngenxa Ukungena shí izicubu. Ngesikhathi esifanayo ke upholisa isikhumba.
Le ngxenye magciwane kokuba umsebenzi elwa namagciwane. Kuyingxenye izidakamizwa kakhulu futhi izibulali-magciwane, kuhlanganise ijeli "Kvotlan". Izibuyekezo uqinisekise ukuthi le cream ivikela kahle isikhumba kuvimbela ukuvuvukala avele futhi.
Lokhu amanzi kuphezulu (ezijulile) uhlanzekile asetshenziswe ekukhiqizeni kwemithi, amakhambi, imijovo. Ubumsulwa manzi ifinyelela inani esiphezulu amanyela - hhayi ngaphezulu kuka-0, 0001%.
Ukufihla yonke imithi nezinye amaphunga, abakhiqizi izidakamizwa 'Kvotlan-ijeli "kufakwe ngezithako zawo flavour ukukhanya emnandi. Iphunga le ngxenye ibuthakathaka ukuze abathengi abaningi bayaqiniseka engekho.
Izinkomba ukulapha Imithi "Izibuyekezo Kvotlan 'nemibono odokotela ngaye omuhle kakhulu, kukhona ezihlukahlukene ukulimala isikhumba (ezisicasulayo, imihuzuko, ukusikeka, izilonda noma contusions), amandla welanga ne ukusha zamakhemikhali, frostbite, namaqhubu nezinduna (induna), i-herpes, dermatitis, desquamation, psoriasis, ukulunywa yizinambuzane, sudamen (kokubili izingane kanye nabantu abadala), isikhumba ukuvuvukala (uma kunzima, izindlala), iziyaluyalu isikhumba ngenxa ukusebenza ngokweqile nokusebenzisa izimonyo kanye makeup. Wayesebenzisa ukuze ahlanze isikhumba. Ngokuvamile, ukhilimu induna "Kvotlan" Kunconywa njengoba ikhambi for induna, kodwa spectrum yayo isinyathelo ngobubanzi okuningi. Iphinde kusiza ukuthuthukisa isimo isikhumba ngemva yizifo ezihlobene nokungabikho umzimba kahle futhi ziyabagulisa eyinkimbinkimbi ekwelapheni amathumba, regenerates esikhumbeni ngemva ukusebenza amakhemikhali yasendlini, ngempumelelo ephatha izilonda fungal, futhi lungasetshenziswa njengendlela yokuthola kwenhlanzeko kwezimo ezimbi ( uma akunakwenzeka ukuthi ugeza izandla noma ukubaphatha ngendwangu emanzi "Kvotlan" - kokuba epikinikini esitimeleni).
Isenzo zomuthi kanye contraindications
Umthelela okuyisivikelo kwayo "isithiyo ongabonakali", okuyinto eyenzeka ngenxa ukusebenza imisebenzi epidermal, evimbela Ukungena microorganism nolaka ngaphakathi emisipheni. Decontamination kwesikhumba kanye ukungabikho befilimu ubuso bayo emva isicelo se-ijeli "Kvotlan" ivumela dermis ukuphefumula ngokukhululekile futhi athole nomoya-mpilo. Ukubhujiswa namagciwane abangela izifo, isikhunta namanye amagciwane ukhilimu isinqandakuvunda "Kvotlan" ukusiza balahle iyiphi ukuvuvukala, induna, comedones, zokukhipha igciwane amanxeba kanye imihuzuko. Ngu izimpendulo, izidakamizwa "Kvotlan" Unazo izakhiwo analgesic. Isisiza kakhulu isimo lesiguli yalimala kabi: ukusha, izilonda, nemivimbo, izilonda. abathengi abaningi ithi Lentulo umphumela wonder izidakamizwa "Kvotlan" kusiza ukubuyisela isakhiwo kwezicubu, ukuvumelanisa isikhumba, balahle izibazi. Izimo zihlanganisa into eyodwa kuphela: ukungabekezelelani ngabanye "Kvotlan" izingxenye ukulungiswa. Kuphephile kakhulu kangangokuthi odokotela musa uphikisana ukusetshenziswa kwalo ngo abesifazane abakhulelwe kanye nokubuyiswa isikhumba izingane. Kuyadingeka ukugcina imithi kude izingane, ngakho musa ngephutha uzame ithuluzi yangaphandle ngaphakathi.
"Kvotlan": Izibuyekezo ikhasimende
Amaforamu futhi ukuxhumana nomphakathi kungembula uhla imicabango yabantu ngezidakamizwa nezidumile induna: kusukela ngentshiseko ngimbonga hlangothi futhi ngisho engenathemba. Ubani uncoma "Kvotlan"? Kusukela ayoliswe "imfihlo" ungabona ukuthi uhambo wokulungiselela lo wesikhumba iyehlisa ingozi yokudunyazwa kusukela ukulungiselela yezimonyo induna. Ngemva ukubukeka kwabo ngezinye izikhathi kwenzeka hhayi ngenxa isikhumba nezinkinga zangaphakathi: iziyaluyalu hormone, ukungondleki, izifo emathunjini, imikhuba emibi, ukucindezeleka noma ukunganakwa umzimba. It kungabonakala Izibuyekezo "azisebenzi" lezi izizathu, "abagcotshiwe, futhi baba ezinkulu nakakhulu." Ngokwesibonelo, uma umuntu ethanda okunamafutha, ezinoshukela, ukudla okubabayo, ukudla okusheshayo kanye notshwala, "Kvotlan" ukhilimu Izibuyekezo wathola ezimbi. Labo abanamathela ngendlela enempilo, ukuqapha umzimba wakho ukhetha ukudla okunempilo futhi esebenzayo kwezemidlalo (noma ekhaya ukusebenzisa), amazwana ukusetshenziswa kwezidakamizwa izohamba ikakhulukazi omuhle. Lapho bebonga, ukukhuluma ngalokhu yezimonyo abadobi abathandi namanye esake sawenza sisendleleni, njengoba kubasiza ukulunywa omiyane. Beauticians ziye zaphawula ukuthi ukusetshenziswa ijeli "Kvotlan" ngemva izinqubo koda kakhulu sifushanise inqubo isikhumba ukuvuselelwa. Ingabe ikhona "nebubi" e ithuluzi ezifana ukhilimu "Kvotlan"? Inani, ukubuyekezwa zazo are gcwele of ngabaza - lena yezimbangela ukuthi kwenza abantu ukuthenga. Isici sesibili - ukwesaba, esikhundleni zomuthi yokuqala ukuthola mbumbulu ezintsha.
Esikhathini Izibuyekezo ungakwazi ngokuvamile ukuthola ulwazi ukuthi ukuphepha izidakamizwa "Kvotlan" ikuvumela ukuba wakufaka yimuphi umthamo oyifunayo kanye nanoma imuphi imvamisa. "Ezigcotshwe njalo ngehora", "esikhundleni kathathu unqume ukusebenzisa 5" - nalezi vulamehlo Isimanga siwukuthi, uyavuma abakhiqizi ukhilimu. Uma kalula ukusebenzisa ijeli kancane on endaweni ethintekile, bese ngokushesha uzophawula ngcono. Abakhangisi zithi lokhu kuzokwenzeka ngosuku olulandelayo. Kodwa ukuqapha impendulo kusenza siqonde ukuthi le nkathi kuncike isimo sokuqala kwesikhumba. Amanxeba, induna, ukuvuvukala, amathumba kungaba inveterate, ngakho kufanele aphathwe eside. Omunye abathengi singemaviki lange ngokwanele elithenjiswe abakhangisi, ukuze kwelashwe egcwele induna, abanye (njengoba kuboniswa umbiko) - kuthatha cishe inyanga. Ijeli akakubangeli yokungezwani komzimba kanye umlutha, ngakho yokusetshenziswa kabusha yayo njengoba ngokuphepha njengoba yesikhashana.
Lapho kangcono ukuthenga ukhilimu "Kvotlan"?
Inani, izibuyekezo thukuthele mayelana nokuthi iziphi izinhlelo zenzeka kunethiwekhi amasayithi ahlobene ne-ubunjalo ezintsha komkhiqizo. Noma imiphi imizamo yokuzibonakalisa ukuthenga ijeli "Kvotlan" behola imali encane ezingenza abe ukuphoxeka omkhulu. Futhi ubukeze ezitolo inthanethi imakwe, iphula umkhiqizo omusha ukuthengisa ngamanani amba eqolo. Izindleko ishubhu elilodwa ukulungela (20 ml) Pharmacy kuyahlukahluka ngokwesilinganiso engama-ruble angu-300 kuya 450. Ngoba intengo efanayo inikeza ijeli "Kvotlan" futhi umkhiqizi. Ubuhle izitolo kanye izitolo inthanethi tube esezingeni umuthi ruble 400 1500. Okwesibili samuntu lokugoqa gel ethandwa - 10 ml - eshibhile. Ngemva kokuzama umkhiqizo entsha yezimonyo yentuthuko zasekhaya kanye nokulinganisa kokufaneleka kwayo, kungenzeka ukuqinisekisa eliphezulu futhi ukuphumelela izidakamizwa. Siyabonga kuye, izinkinga zesikhumba ezibonakala Ezingalapheki ahlale esikhathini esidlule.
Chondroprotectors ngoba amalunga omzimba. Top hondroprotektory. Chondroprotectors - Izibuyekezo
Motodozhdevik ukwehlukanisa: ukubuyekeza nempendulo